Jolay 2019 | Save A Train
Month: Jolay 2019
Home > Jolay 2019
Fotoana famakiana: 5 minitra Tsy misy milaza fialan-tsasatra na vakansy, tena toy ny rano zaridaina, Tsy ny hevitrao? Sunshine, gilasy, ary ny sliding nidina ny rano ny sasany goavana tsary dia ny fomba fahandro ho an'ny voly indrindra nandritra ny Summer Holidays! Nanao ny asa sarotra izahay tamin'ny fitsapana ireo valan-drano tsara indrindra…
Fotoana famakiana: 4 minitra Raha vantany vao niaina ny fampiononana ianao, tsy hanahirana, ary mahatalanjona amin'ny dia amin'ny dia amin'ny lamasinina, Tena sarotra fiverenana ho amin'ny fiainana mialoha rail. Indrindra rehefa miresaka momba ny tsara indrindra lamasinina Eoropeana lalana amin'ny fahavaratra. A kaontinanta feno Toerana mahafinaritra lalana, sary miavaka, ary ambim-pahalalana amin'ny toerana tsy mampino…
Fotoana famakiana: 4 minitra Raha ny amin'ny kaontinanta samihafa toy ny kolontsaina ho Eoropa, dia afaka miloka ny gastronomic fomba amam-panao dia toy ny isan-karazany! Raha toa ianao vonona ny hanohitra ny fahafahana teo mahaliana isan-karazany (isika dia mampiasa izany teny voan'ny eto) saran-dalana, avy eo jereo…